NIO နှင့် Zheshang Group တို့သည် လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ လဲလှယ် ရေး စီမံကိန်း ကိုပူးတွဲ တည်ဆောက် ကြသည် - Pandaily
NIO နှင့် Zheshang Group တို့သည် လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ လဲလှယ် ရေး စီမံကိန်း ကိုပူးတွဲ တည်ဆောက် ကြသည်
Jan 10, 2022, 12:10ညနေ 2022/01/10 14:16:33 Pandaily
တ႐ုတ္ လွ်ပ္စစ္ ကား ကုမၸဏီ NIO Inc က ဇန္န၀ါရီ ၇ ရက္တြင္ ေၾကညာZhejiang Commercial Group Co., Ltd. နှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့သည်အစီအစဉ် ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အနေဖြင့် နှစ်ဖက် စလုံးသည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် Zhejiang ပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း ရှိ အနည်းဆုံး အဝေးပြေးလမ်းမကြီး ၁၅ ခုတွင် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ များတည်ဆောက် ရန်စီစဉ်ထားသည်။
Zheshang Group သည် ပြည်နယ် ၏အကြီးဆုံး နိုင်ငံပိုင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စီးပွားဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အော်ပရေတာ ဖြစ်သည်။ NIO နှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုသည် Zhejiang ၏ မြန်နှုန်းမြင့် စွမ်းအင် လဲလှယ် ရေး ကွန်ယက် တည်ဆောက် မှုကို အရှိန် မြှင့်တင် လိမ့်မည်။
လက်ရှိတွင် NIO သည် တစ်နိုင်ငံလုံး ရှိ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ ၇ ၈၁ ခု ကိုတည်ဆောက် ခဲ့ပြီး ၂ ၀၅ အဝေးပြေး လမ်းမ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ များ၊ ၆ ၁၅ အလွန်အကျွံ အားသွင်း သည့် ဘူတာ များ၊ ၆ ၂၆ ဦး တည်ရာ အားသွင်း စခန်း များ နှင့်တတိယ ပါတီ အားသွင်း လိပ်ခေါင်း ၄၅၀, ၀၀၀ ကျော် တို့ပါဝင်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် NIO သည်ကား သစ် ၁၀, ၄ ၈၉ စီးကို တင်ပို့ ခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၄၉. ၇% တိုးတက်ခဲ့ပြီး Q4 သည် ၂၅၀, ၀ ၃၄ စီး၊ တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၄၄. ၃% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ခုနစ် လ ဆက်တိုက် အပြုသဘော တိုးတက်မှုနှုန်း အောင်မြင် ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:NIO သည် ဇန်နဝါရီလတွင် လျှပ်စစ် ကား ဝယ်ယူမှု လျှော့စျေး အစီအစဉ်ကို ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် NIO သည် အပြိုင်အဆိုင် များသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို လက်ခံခဲ့သည်။ Smart Electric Flagship Car ET7 နဲ႔ အလတ္စား Smart Electric Coupe ET5 တို႔ကို မိတ္ဆက္ ခဲ့ပါတယ္။ NIO အိမ် ၁၅ လုံး နဲ့ ဝန်ဆောင်မှု စင်တာ ၇၂ လုံး ဆောက်လုပ် ပြီး တစ်ပတ်ရစ် ကား လုပ်ငန်း ကိုလည်း တိုးချဲ့ ခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ချဲ့ထွင် မှုအရ NIO သည် နော်ဝေ ဈေးကွက် သို့ တရားဝင် ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။
Auto Sep 17 စက်တင်ဘာ 17, 2021